All anya na Lexington Times n'ihi egwuregwu na Lingfield Park
Na dị nnọọ a ụbọchị ole na ole na-aga ugbu a ruo mgbe nile-Weather Atọ-Year-Old Mile na Lingfield Park, a ngụkọta nke 13 ịnyịnya na ha na-enye ọzụzụ na-eyeing ndị chọsiri ike inweta £ 150,000 na-agbata n'ọsọ.
The agbụrụ ga-ewere ọnọdụ mgbe Surrey dabeere N'ezie si 3pm on Good Friday, ma na-ahụ otu n'ime ndị kasị akpali akpali ewepụghị agbụrụ na ọduọ kalenda a na Ista. Otu n'ime afọ a contenders bụ anọ a kara na Emirates Skycargo, onye e tipped na 4/1 na-na-agbata n'ọsọ.
Ma mgbe Emirates Skycargo nwere mma emegide, o yiri ka ọtụtụ ndị ọkachamara nwetara anya ha na Lexington Times na-eje ije n'ebe mmeri nke afọ a. Mgbe a n'olu mmeri mmụọ ozi Onyenwe anyị na e depụtara opupu Cup na nso nso, Lexington Times ugbu a n'elu-gosiri na a akara nke 108.
Atọ afọ Bay nwa ịnyịnya ibu e adọta uche nke ọtụtụ elu profaịlụ onu ogugu ọduọ ụlọ ọrụ, gụnyere Tim Palin, a ọnụ na-ekwuru Middleham Park ọduọ. O kwuru, sị: "Lexington Times maa na-aga n'ihi Nile-Weather Atọ-Year-Old Mile.
"Anyị na-eche nke na-aga n'ihi na a 2,000 Guineas ikpe ma, na ziri ezi na- Lingfield Park na All-Weather n'asọmpi, £ 150,000 bụ a oke ite na-agaghị ahụ kpọrọ n'imi. "Ọ bụ ante-post mmasị na, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ mmiri na-agafe n'okpuru àkwà mmiri n'etiti ugbu a na post oge; anyị na-n'ezie na-atụ anya ya. "
Lexington Times ugbu a banyere ke Guineas.
Steve amara dika Knight, onye nwere mbak ke Lexington Times, na-ekwu na ọ na-enwe ịnyịnya ga agaziri mma ọbụna n'afọ ọzọ. Afọ gara aga, e nwere ndakpọ olileanya mgbe ya na-agba ọsọ na Solario, ma ihe na-now anya elu maka Middleham Park ọduọ-ekesịpde nwa ịnyịnya ibu.
Palin nọgidere: "M ga-anya ma ọ bụrụ na ọ bụ a Group One ịnyịnya ma ọ bụ nkà na pụrụ ịbụ a ịnyịnya ndị kpatara ya ebe ke Guineas. Ọ naanị kwesịrị iji melite abụọ ma ọ bụ atọ pound na-asọmpi na Group agbụrụ m na-eche na o nwere ike ime nke ahụ. "
Ọ bụ ezie na ndị nwe na-atụ anya na nke a izu si ihe, ọ e kwuru na Lexington Times ga n'ezie abata ya na site n'oge okpomọkụ. Na 12 ịnyịnya-alụ na na 3rd April, Nile-Weather Atọ-Year-Old Mile ga-zuru okè ohere maka ọzụzụ iji gosi otú nwere o nwere tupu mgbe ahụ.
Ruo mgbe ahụ, ihe anya nchekwube, na Palin agbakwunye: "Lexington Times bụ ka a na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na ọ pụrụ ịbụ na-abịa June ma ọ bụ July ọ na-agba ọsọ n'elu ìhè na anyị ọzọ. N'oge ezie, ọ na-ekwu. "
Lexington Times na-n'elu-gosiri na a akara nke 108 mgbe a n'olu mmeri mmụọ ozi Onyenwe anyị na e depụtara opupu Cup n'elu asaa furlongs na Lingfield Park urua a ngwa-ngwa-Track Qualifier maka All-Weather Atọ-Year-Old Mile.
Nwa Paco Nwa e tiri ọkara a ogologo n'ime atọ site Aktabantay na Group atọ Solario stakes na Sandown Park ke August, ma ọ bụghị emepụtaghachi na abụọ ụdi amalite na Doncaster na Newbury.
Tim Palin, ọnụ na-ekwuru nwe Middleham Park ọduọ, kwuru: “Lexington Times maa na-aga n'ihi na 32Red All-Weather Atọ-Year-Old Mile. “Anyị na-eche nke na-aga n'ihi na a 2000 Guineas ikpe ma, na ziri ezi ka Lingfield Park na All-Weather n'asọmpi, £ 150,000 bụ a oke ite na-agaghị ahụ kpọrọ n'imi.
“Ọ ga-abụ a ibu ụbọchị maka ndị nwe nakwa n'ihi na ọ dịghị nke ha ga na-arụ ọrụ na onye ọ bụla ga-enwe ike ga-esi n'ebe. A ga-enwe oké ngagharingosi ikuku si ihe m nwere ike kpọkọta si afọ gara aga na ọ bụ ihe ùgwù ịbụ akụkụ ya niile.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Horse Racing, News